Ihe omimi nke 'ezi obi ulo' PsyOp maka iwepu nnwere onwe gi niile na iwebata 'ndi uwe ojii chere' (akuku 2): Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 21 October 2019	• 10 Comments
isi mmalite: rgcdn.nl
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ka igwe PsyOp sirila jiri ụzọ ọ bụla enwere ike iji chịkọta ọmarịcha ezigbo ndụ 'Ruinerwold' ezigbo-adịgboroja ndụ ncha. Ọ bụ nnukwu eserese ihe nkiri, nke etinyedị na blọọgụ na vidiyo na-etinye ọnụ. N’ezie nke ahụ bụ “echiche izu nzuzo”, n’ihi na steeti ahụ anaghị eme ụdị ihe a, John de Mol na ụlọ ihe nkiri ya dị ka onye nwe ANP agaghị eme nke ahụ ma ọlị. Ọ na - enweta ego ruru ijeri ya n'ụzọ dị mma ma ọ chọghị ọnọdụ maka nke ahụ.
De mara mma na fim nke 'nna nna' Gerrit Jan van Dorsten (aka John Eagle) nke 'ghost ghost' a tụbarala anya, n'ihi na n'ụzọ ọzọ ị na-eche na ọ nwere ike ịbụ ihe omimi. Iji maa atụ, you ga - agụ edemede dị ụtọ isiokwu Volkskrant a ma ọ bụ ebe a Geenstijl. De Telegraaf, dị ka onye kasị ukwuu na-akwalite PsyOp a, na-akpali ndị na-agụ ya ka ha bụrụ onye otu kachasị. Can nwere ike ịrụ ọrụ na nke a site na ịmepe edemede na Incognito Mode (Google Chrome). Then nwere ike ịgwa akwụkwọ mara mma ụmụ nwoke (dị ka nke a) ka na-agụ n'efu.
Emebewo nnukwu akụkọ akụkọ nke ga-adọkpụ gị n'ụdị ọchịchọ dị ka Dan Brown. Anyị Dutch hụrụ ihe a dị ịtụnanya. Anyị nwere obi ụtọ na nke a. Ọ bụrụ na ọ bụghị eziokwu, ọ ka bụ akụkọ na-atọ ụtọ. Mana gịnị kpatara ụdị ihe a agaghị abụ eziokwu? Gini kpatara na usoro mgbasa ozi tinyere itinye mgbalị ahụ niile? Ọfọn enwere ụfọdụ okara abụọ na PsyOp a. PsyOp (mwepu maka: akparamaagwa oru), dika onodu, na - akwusi gi ike na usoro mgbasa ozi iji mee ka ndi mmadu kwenye iwu nke o na-anabataghi. Maka nke a, ị ga-ebu ụzọ kpọọ ha egwu. Yabụ imepụta nsogbu ma ị tinye nsogbu ahụ n'ọtụtụ mgbasa ozi. Then ga-akpasu ndị mmadụ iwe site na otu mgbasa ozi. Na social media, ndị agha troll gị dị njikere ịchụpụ onye ọ bụla dị nkatọ ozugbo. Mgbe ahụ ị nwere oke nwere oke maka ihe edozi ịchọrọ ịme ka ihe niile pụta. "Nsogbu, Ngwọta, NgwọtaA na-akpọ egwuregwu a nke uche.
Ihe ngwọta dị na shelf na opera ncha a pụtara nke ọma site na ụbọchị mbụ: Gọọmentị chọrọ ka ha nwee ike ile anya n'azụ ụzọ ọ bụla. N’ebe ịchọrọ akwụkwọ ikike n’aka onye ọka iwu ọhaneze, ọ ga-akacha mma iwepụ ụzọ ahụ. Maka nke ahụ, ị ​​nwere ike iwepụta nsogbu na mgbasa ozi na-eme ka onye ọ bụla chee “Ee, mba, nke ahụ agaghị adị ọzọ. Ọ dị ihe a ga-eme banyere ya!Nna ahụ (ya na mara mma opera aha ya bụ John Eagle) nwekwara okpukpe nke ya ma na-akpọkwa ụmụ ya ka usoro agụmakwụkwọ mgbe niile. Ga - ahụrịrị ya: ị ga - emeso ndị chọrọ ime mmụta n'ụlọ akwụkwọ ozugbo. "Ihe kpatara agụmakwụkwọ ụlọ a ga-abụrịrị ‘‘ ụlọ ụlọ ’ebe Gerrit Jan kpọpụtara ụmụ ya, na-agbaso iwu steeti.", Ndị mgbasa ozi na-akọ akụkọ anyị n'usoro ncha a. Na nkenke: ọ bụrụ na ịnabataghị ụkpụrụ agụmakwụkwọ nke steeti n'ọdịniihu, mgbe ahụ, ejikọtara gị na eccentric a, aha ya bụ John Eagle, a na-ewere gị dị ka onye na-ekewapụ ụmụ gị na ụwa.
Yabụ na n'ụlọ akwụkwọ praịmarị, a gwara nwa gị na ọ bụghị nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị, kama na ọ ka nwere ike ịhọrọ nwoke ma ọ bụ nwanyị na enwere ike ịtụgharị, ọ bụrụ na ị nweghị mmasị na ya ma ị kpọpụ ụmụ gị n'ụlọ akwụkwọ. site ugbu a gaa n’ihu ‘nne na nna ara’.
Enwere ọtụtụ sọlfọ abụọ na PsyOp a. Iche echiche! Ghichaa mmiri nke aka gi na ubi ahihia nke gi? Mgbe ahụ ị bụ onye isi dị ka John Eagle. Osisi n’enye gi nma ma mekwaa ihe nke gi? Mgbe ahụ ị bụ onye isi dị ka John Eagle. You nwere weblog ma ị dee banyere ihe gbasara mmụọ? Mgbe ahụ ị bụ onye isi dị ka John Eagle. Na blog nke John Eagle n’ezie dị ka adịgboroja ka vidiyo ya. Ọmarịcha ime; nnukwu edemede edemede! Evertụleela otu ihe nkiri ma tụfuo onwe gị kpamkpam na fim ahụ wee chee na ọ bụ ihe mere? Nke ahụ na-eme ugbu a. Sitena fim nke John de Mol nwere ụzọ ọ bụla iji mepụta fim. Onye na-agwa gị na eziokwu na akụkọ anaghị agwakọta mgbe John de Mol nwere ọrụ aka ọ bụla iji tinye ncha a ọnụ? "Ee, mana ha niile nwere ndị akaebe mara nwoke ahụ ma ọ bụ ezinụlọ". Ee, dị ka na fim. Havekwesiri ịbanye n'ụkpụrụ omimi. Can nwere ike ime ka ndị mmadụ yie ndụ na 'ezigbo' na sinima, ajụjụ ọnụ, na akụkọ mgbe ochie na akụkọ ntanetị niile, onyonyo, ụda, nwata, okenye na ihe ndị ọzọ.
Agụọla m ụka ugboro ugboro usoro ndị eji eji ihe omimi miri emi mepụta. Ọ ga-amasị m ikwugharị ebe a maka ndị na - agụ akwụkwọ ọhụrụ. Maka na ọ bụrụ na ị na-agbaso akụkọ ahụ kwa ụbọchị, ọ dị ezigbo mkpa ka ị mata okwu a, maka ị ga-ahụ usoro ndị dịnụ maka iji kpọọ ndị mmadụ naanị. Dị mfe.
A na - emepụta ntinye site na GAN (Networks Networks Networks)) usoro ngwanrọ. Nke a bụ ngwanrọ nwere ọgụgụ isi nke, dabere na usoro AI ọtụtụ na netwọk, na-emepụta ihe odide nke ihe ọ bụla. AI bụ Bekee maka ọgụgụ isi; ihe pụtara maka ọgụgụ isi. Ebe ọzọ AI na-enyocha ihe oyiyi nke netwọk mbụ kere ma jụ ma ọ bụ kwado ha. Site na ime nke a na usoro, ihe odide a na-aghọkwu ihe ọ bụla na nzọụkwụ ọ bụla, ka i wee nwee ike mepụta ndị na-emepụta akụkọ zuru ezu nke na-adị ka ndị nkịtị na-adị kwa ụbọchị (ndị ị ga-ezute n'okporo ámá). Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara kpọmkwem otú nke a si arụ ọrụ, buru ụzọ lelee vidio dị n'okpuru ebe a site na NVIDIA (onye a ma ama ndị na-emepụta iheadị kaadị PC).
Ọ bụghị nanị na ọ bara uru ịmara na usoro a dị omimi dị adị, kamakwa otu esi eme ka njirimara dị omimi, dịka ọmụmaatụ, vidiyo ma ọ bụ ịmepụta profaịlụ mgbasa ozi (gụnyere akụkọ ihe mere eme nile, tinyere foto na vidiyo ma nwee mmasị n'aka ndị ọzọ) profaịlụ profaịlụ mgbasa ozi miri emi). Dịka ọmụmaatụ, "ndị ọrụ ụlọ" ma ọ bụ ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ telemarketing, dịka ọmụmaatụ, site na "ndị ọrụ ụlọ" ma ọ bụ ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ telemarketing, dịka ọmụmaatụ, ebe ndị amaokwu ị na-ekwurịta okwu nwere ike ị zoo n'azụ profaịlụ dị omimi (ndị enyi ndị enyi ha jupụtara na profaịlụ miri emi). Ha nwere ike imegide ndị mmadụ n'oge usoro iheomume ha na mkparịta ụka iji mee ka ndị mmadụ nwee mmetụta n'etiti ụfọdụ.
Ka anyị lelee ngwa ngwa niile, ma tupu anyị amalite, ọ bara uru ịmara na ụlọ egwuregwu na ụlọ ọrụ vidio, ma ndị na-emepụta TV, nwere usoro dị otú ahụ ogologo oge. Otú ọ dị, arụ ọrụ ugbu a dị mfe ka ị nwee ike ime ya n'onwe gị na PC-garden-and-kitchen PC.
Mgbe Paul Walker nwụrụ n'etiti ọgba aghara 7 ngwa ngwa ma na-ewe iwe, a kpọrọ Weta Digital ụlọ ọrụ iji mezue ihe nkiri nke Paul Walker. Dabere n'ụdị ụzọ dị iche iche dị ka oyiyi ochie, nchọpụta ahụ nke ụmụnna Pọl na nchịkọta nke isi Pọl, Weta Digital wetara Pọl Walker azụ. Vidio dị n'okpuru ebe a na-enye nchịkọta nke otu a si arụ ọrụ.
Usoro nchịkọta 3D a na-eji eme ihe ruo ọtụtụ afọ nke ndị na-eme ihe nkiri na-eyi uwe iji dekọọ mmegharị ha ma weghachite ihe odide ndị e kere site na CGI. Nke ahụ dị na usoro eji Paul Walker, naanị na ndị na-eme ihe nkiri na-eji ejiji eme ihe. Usoro a dị ugbu a maka ndị nwere ego dị ala (lee vidio dị n'okpuru ebe a), ma ezigbo ihe atụ nke ihe nkiri nke usoro a ejiworo mee bụ ihe nkiri Avatar na 2009 (lee ebe a).
NVIDIA ejiriwo ejiji ndị a na nkà na ụzụ CGI eme ihe, n'ihi na ọ na-eji netwọk na-eme ihe iji zụlite akụrụngwa ahụ. N'ezie, nke a bụ otu usoro ahụ n'azụ ihu ihu miri emi. Ugbu a, NVIDIA enweghi ike ịmepụta ihu ndị na-adịghị adị, ma nwere ike ịkwọ ụgbọala site na obodo nwere igwefoto ma mee ka ọ ghọọ ebe ọdịda oyi (ozugbo). Dị ka ihe atụ, a pụrụ iji usoro dị otú ahụ na-azụ ọrụ nke AI nke ụgbọala na-akwọ ụgbọala na-agbanwe ọnọdụ ihu igwe, mana enwere ike iji ha mee ka ọ bụrụ na ọ dịghị mkpa ịchọta ya. Igwefoto GoPro dị mfe ma ọ bụ kamera weebụ zuru oke. Lee anya site na 1: 03 min. Na vidiyo dị n'okpuru iji hụ otú ọrụ ahụ si arụ ọrụ.
Ugbu a ị nwere ike iche na enweghi ike ime nke a n'oge na-adịghị adị. Chee echiche ọzọ. Anyị ahụworịrịrị n'elu na ọ ga-ekwe omume ịmepụta ndị anaghị adị adị site na Networks Adversarial Networks. Anyị maara ugbu a na ma obodo ma ọ bụ obodo nwere ike ịmepụta site na netwọk na-adịghị. Ajụjụ a bụ ma ọ ga-ekwe omume na oge. Ọ bụ ebe ahụ ka nkà na ụzụ nke mmegharị ihu ihu oge na-abata. Nke a dị gburugburu ebe obibi dị mfe site na afọ 2015 (lee vidiyo n'okpuru).
Naanị, anyị nwere ike ikwu na ọ ga-ekwe omume ruo ọtụtụ afọ ịmepụta vidiyo vidio ndị dị omimi. Otú ọ dị, nkà na ụzụ aghọwo ihe dị mfe ugbu a na npụta nke Networks Adversarial Networks, netwọk ndị na-eme ntanetị na mmegharị ihu ihu oge, na ị nwere ike ịmepụta otu akụkọ ihe mere eme nke onye na-adịghị adị adị na nkeji oge, nyochaa onye ahụ na-adịghị adị nwere ike ịmepụta gburugburu ebe ọ bụla na eserese ọ bụla na ọnọdụ ihu igwe ọ bụla.
Kedu ihe nke a pụtara? Iji malite, ị nwere ike ịsị na ị nweghị ike ịtụkwasị obi na 100% maka afọ. Lee ebe a Ogologo oge ole ka a na-eji CGI eme ihe na ụlọ ọrụ ihe nkiri. Otú ọ dị, n'oge ọ dị mfe na onye ọ bụla nwere ego nke puku euro ole na ole nwere ike ime nke a. Ọ bụrụ na anyị ewere na mgbasa ozi dị mma, mgbe ahụ, anyị nwere ike iche na ha ejighị usoro dị otú a ruo ọtụtụ afọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị na-eche na ọ bụrụ na gọọmenti ejiri arụmụka uche na-eme ka ndị mmadụ banye n'ụkpụrụ a nabatara nke iwu ọhụrụ ma dị oke njọ, mgbe ahụ, anyị ga-achọpụta na kemgbe ọtụtụ afọ, ọ dịghị ihe ọ bụla na-eguzoro n'ụzọ ịmepụta ozi ọma. N'okwu ahụ, ọ na-akpali mmasị ịmara na ụlọ ọrụ mgbasa ozi kachasị ukwuu nke mba (Algemeen Nederlands Persbureau; abụrụ ANP) dị n'aka onye na-emepụta TV (onye bụkwa otu nde mmadụ). Olee otú nnukwu anyị ga-esi jide n'aka na ejibeghị usoro ndị a eme ọtụtụ afọ?
O yiri ka mgbasa ozi na-achọsi ike imechi ọnụ mmiri ahụ Martin Vrijland kụrụ na ala nke nnukwu ụgbọ mmiri mgbasa ozi. Kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a, ana m akọwa otú mgbasa ozi nwere ike isi mee ihe oyiyi. Ya mere, Jort Kelder na Alexander Klöpping nabatara na Kelder & Klöpping TV gosi ya ihe omimi dị. Ọzọkwa usoro redio Ihe nchọta foto BNR Nieuwsradio (ndị na-ahụ maka ọdịiche) kwuru n'oge na-adịbeghị anya ihe m na-ede banyere ogologo oge. O doro anya na egwu ahụ na-ahụkarị na ndị na-eme ihe omume ga-anwa ime ka onye na-ekiri ihe na onye na-ege ntị na ụgbọ mmiri. Ị ga-anọgide na-atụkwasị obi na mgbasa ozi nakwa na ọchịchị onye kwuo uche ya, n'ihi na ọ dịghị ihe dị njọ karịa ìgwè mmadụ ahụ na-agbagha (ikwu okwu na steeti Jort).
N'ezie "ihe ngwọta" maka ihe a nile bụ na gọọmenti na ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka kọmputa ga-anwa ịgbakwunye ụdị ihe nkiri na fim, nke mere na ha nwere ike ịlele maka eziokwu. Nanị ajụjụ bụ na ọ bụrụ na gọọmenti na-eji akụkọ ụgha eme ihe ruo ọtụtụ afọ iji gbanye iwu ma kpọọ ndị mmadụ ma ma mmiri ma ọ bụ na ọ bụ ihe a pụrụ ịdabere na ya. Onye na-egbu anụ ọ ga-ajụ anụ nke ya? Mba, ọ bụghị. Ozi niile sitere na John de Mol, NOS, De Telegraaf na ihe ndị ọzọ na-abụcha ndị a pụrụ ịdabere kpamkpam na ndị na-akwụwa aka ọtọ! Nsogbu. Ị chere n'ezie na John de Mol ga-apụta na TV taa ma ọ bụ echi ka ọ sị: "Ndo umu nwanyi na umuaka, emeela m ozi ndi ozo na ulo oru TV na ngwanro m nwere. Enwetara m gị akụkọ na-adịghị ahụkebe ma jikọọ ya na arụmọrụ uche na ego nke ụtụ ego ma jupụta akpa m"? Mba, ọ bụghị. Ma n'ezie ị ghaghị inwe okwukwe na mgbasa ozi na gọọmenti, n'ihi na onye ọzọ ị ga-atụkwasị obi? Na-agụ ebe a...
Ihe omume miri emi nwere ike ime:
profaịlụ mgbasa ozi miri emi
foto na vidiyo site n'oge gara aga tinyere ezinụlọ na ndị enyi
nyochaa na onye na-abụghị onye dị ndụ
ihe oyiyi si na ese foto nche
vidio dị ka ihe akaebe na akụkọ (ozi ọma na-emepụta)
na ihe ndị ọzọ
Anyị nwere ike ikwu hoo haa na site na ọrụ aka ọrụ ọ nweghị ihe gbochiri 'mmụọ ezi mmụọ' na PsyOp. Nke ahụ bụ naanị obere oge nkwadebe ọnwa ole na ole. N'ezie ị ka ga-eche:Ee, mana ụlọ ahụ dị na Zwartsluis bụ ụlọ ahịa egwuregwu ụmụaka?“Ever gabuola na Zwartsluis? Think chere na enwere roosta nke na-agụ ihe ahụ ike?
Steeti ga-ejikwa PsyOp a chepụta ụdị ụkpụrụ maka 'echiche na-agbagọ agbagọ'. Nke a na - eme ka George Orwell 1984 ndị uwe ojii chee na ha bụ ezigbo eziokwu. Ndi mmadu gbara m n’ukwu ka Peter R. de Vries na njem nke Transavia. Gụọ ya ebe a gara n'ihu na akụkụ 3.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: bnr.nl, wikipedia.org, volkskrant.nl, geenstijl.nl, telegraaf.nl, telegraaf.nl
Tags: blog, blogspot, Eagle, agba, Gerrit Jan van Dorsten, John, psyop, okpukpe, Rock, ndi igbo, nna ekene
21 October 2019 na 11: 15
Ọ bụrụ na ihe doro anya na adịgboroja ... ị nwere akwụkwọ mpịakọta steeti na-echekwa azịza ya:
21 October 2019 na 14: 40
Ihe m na-adọ aka na ntị maka ọtụtụ iri afọ na gburugburu ebe m nọ ugbu a na-eyi egwu imezu. Ndị niile na - egbu ọchụ "Oh, ọ gaghị aga ngwa ngwa ahụ.", "Steeti nọ ebe a iji chebe anyị.", "Anyị nọ ọtụtụ ma ha anọghị."
Site na nke ikpeazu, aga m edozie ma megharia ya n'ihi na m ekpebiela na nkezi Neanderlander anaghị adị anya nke ọma na ya mere na enweghị 'ọtụtụ' na Madurodam.
Ọ ga -adiriri na ndị uwe ojii nwere ike ịgba aka n'ọnụ ụzọ onye ọrụ NSB dị na mpaghara. Inoffizieller Mitarbeiter na ụmụ gị nwere ike ịpụ pụọ na-enweghị ịkọwa onwe ha. Ma na teknụzụ niile dịnụ, ọ bụ ikuku iji nyocha ụlọ gị nke ọma na iwepu ihe mgbochi niile.
Yabụ na ọ ga - abụ na otu pere mpe nwere ike gaa n'ihu na-eche ọtụtụ atụrụ ... Nlegide na Ohu. Madurodam, ya niile dị jụụ ma nwee omume enyi mana enwere aghụghọ ...
21 October 2019 na 15: 34
"Kinddị akpịrịkpa nke echiche ịgba izu na echiche okpukpe" .. De Telegraaf na-agbagide psyop na ndị uwe ojii. Etubeghị aha Martin Vrijland, mana njikọ dị n'okpuru ala guzobere nke ọma. Aka nkatọ nile a na-ekwu na steeti ahụ nwere na 'nna nna' na 'ghost ghost'.
(mepee ọnọdụ incoginto nke Google Chrome)
21 October 2019 na 15: 40
Ma ọ bụrụ na PsyOp na-achọ n'ezie ịdaba na nwoke ahụ, ozu nke nwanyị ahụ dị omimi kpamkpam ka enwere ike ịchọta ya mgbe a na-elekọta ubi (ma ọ bụ ebe ọzọ). Mgbe ahụ akụkọ a na-enweta nkwalite ntụkwasị obi buru ibu.
21 October 2019 na 15: 44
ị ga - ewere ya na ekwenyela na ọtụtụ ndị ekwenye ekwenyelarị ma ngwa ngwa mgbe oge ruru ka ọ bụrụ 'onye ahụ ghagburu onwe ya' na nsogbu njigide omume n'okpuru mkpọchi na igodo ... Okwu junta ga - agwụ n'oge enwere ike ndị a psychopaths nwere n'aka ha.
21 October 2019 na 15: 45
Ọ dabara nke ọma, ndị nọọsụ nwere ike ilekọta ndị a bụ ndị emerela ọzụzụ ha.
Naomi Hoogeweij na-ele anya ya:
21 October 2019 na 15: 59
enweghi obi ojoo na madurodam…
Nwanne Nwaanyị ga-eji ịhụnanya mesịa gị
Ekwesịrị m inye gị ya, ị na-agbanwe agbanwe n'echiche gị Salmon 😉
21 October 2019 na 16: 05
Onye ọzọ gbagwojuru anya nke enwere ike ibuga ya na psychelance ma ọ bụrụ na ezinaụlọ ma ọ bụ ndị agbata obi nwere ike ịdọ ndị uwe ojii aka na iwu Edith Schippers na-achịkwa, nke mere na onye ọ bụla dịtụ iche nwere ike kpọchiri ya maka ikiri.
Anyị nzọ na ọ bụ onye na-akwado izu nzuzo?
21 October 2019 na 16: 27
ọ bụchaghị ebumnuche gị ka ezinụlọ nọrọ n'okpuru radar na madurodam. Dịka ọ dị mma ohu ohu nkịtị, ị ga-anọ na radar ma kwụọ ụgwọ ụtụ isi niile enwere ike, ma nọrọkwa mgbe ị na-elekọta na n'ihi ohu ahụ.
Kedu ka ezinụlọ si Ruinerwold ga-esi nọrọ n'okpuru radar ruo ogologo oge?
22 October 2019 na 03: 20
Edemede siri ike ọzọ Martin! Edere ederede dị elu.
" Ndị 'mmụọ ezinụlọ' PsyOp (arụmọrụ nke mmụọ): na-ewepụ nnwere onwe gị ma na-ewebata 'ndị uwe ojii'
Ihe omimi nke 'ezi obi ulo' PsyOp maka iwepu nnwere onwe gi niile na iwebata 'ndi uwe ojii chere' (akụkụ 3) »
Nleta nile: 13.991.750